SSB: Soomaalida oo ah qowmiyada ugu badan ee qaab qoxootinimo ah Norwey kusoo gashay - NorSom News
SSB: Soomaalida oo ah qowmiyada ugu badan ee qaab qoxootinimo ah Norwey kusoo gashay
Xarunta dhexe ee qaabilsan tirokoobka SSB(Statisk Sentralbyrå) ayaa shalay soo saartay warbixin tirokoob cusub ah oo ay kaga hadlayso tirada dadka Norwey kusoo galay qaab qoxootinimo ah. SSB ayaa sheegtay in guud ahaan dad tiro ahaan gaaraya 199.400 oo Norwey degan ay asalkoodii hore qaab qoxootinimo kusoo galeen wadanka. Waxayna dadka isugu jiraan dad si toos ah qaab qoxootinimo ah u yimid Norwey iyo dad ay iyagu u dacwoodeen. (Ciyaalka wadanka ku dhashay, kuma jiraan dadka qoxootinimo ahaan loo xisaabinayo).
Soomaalida ayaa noqotay groupka ugu badan ee qaab qoxootinimo ah kusoo galay Norwey. Waxayna tiro ahaan gaarayaan dadka soomaaliyeed ee qoxootinimo kusoo galay Norwey 27.300, iyada oo 10 647 ay yihiin kuwo loo dacwooday oo qaab famili ah lagu keenay. Waxaana kusoo xigo dadka ka yimid ciraaq(20.600) iyo Eritrea (16.900).
Tirokoobkii ugu danbeeyay oo ay soo saartay SSB dhowr bilood kahor ee ku saabsan tiro dadka soomaaliyeed ee Norwey dagan waxa ay ku sheegtay inay yihiin 40.100. Hadii laga jaro tirada ay shalay soo saartay ee ah in 27 300, waxay la micno ah in tirada ciyaalka soomaaliyeed ee Norwey ku dhashay ay tiro ahaan kor u dhaafayaan 12 000 ama 31% %. Sadexdii qof ee soomaali ee Norwey dagan mid ayaan ku dashay wadanka.
Xigasho : SSB iyo VG
Previous articleSylvi Listhaug: Ayaan Xirsi Ali waa qof aan ku daydo oo tusaale fiican ii ah
Next articleIsmael Sulub: 14-sano jir soomaali ah oo leh talent kubadeed oo kasoo baxayo Ringsaker,Hedmark.